« Xtrême combat » andiany faha-3 izay hotontosaina ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina amin’ny sabotsy 7 martsa 2020 ho avy izao. Hetsika izay tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny faha-10 taonan’ny klioba sady ho fanokafana ihany koa ny taom-pilalaovana vaovao satria eo ambany fiahian’ny FMKDA « Federation Malagache de Kickboxing et Disciplines Associées ». Tanjona, hoy ity filohan’ny Lion Force ity, ny hanomezana ainga vao indray ny taranja Kickboxing izay somary natoritory kely tao ho ao. Ady kickboxing sy K1 mahatratra 15 no harahina amin’izany ary tafiditra ao anaty fandaharam-potoana koa ny ady eo amin’ny taranja “Boxe Anglaise”, “Savate Pro” ary ny Mma sy Pancrace . Dia hisy kosa ny “demonstration Bodybuilding. Lelavola mitentina hatrany amin’ny 6 tapitrisa ariary no hozaraina amin’ireo mpikatroka amin’izany ka ny voalohany isaky ny sokajin-danja dia hotolorana 200.000 ar ireo laharana faha-2 kosa homena 100.000 ar. Marihina fa anisan’ireo hiakatra ringa indray ireo kalaza fahiny teo amin’ny taranja ady totohondry Malagasy toa an’i Soloniaina Razanadrakoto sy Lalaina Rabenarivo.